३०५ को निःशुल्क परीक्षण – United Reference Laboratory (URL) Pvt. Ltd.
३०५ को निःशुल्क परीक्षण
पोखरा, २९ साउन। युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल) र माउन्ट अन्नपूर्ण उमावि, नदीपुरको संयुक्त आयोजनामा नदिपुरमा शनिबार भएको मधुमेह तथा मृगौलासम्बन्धी रक्त तथा पिसाब परीक्षणमा तीन सय पाँच जनाको निःशुल्क परीक्षण गरिएको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ युरोलोजिस्ट डा. ध्रुवबहादुर अधिकारीले स्वस्थ जीवनका लागि खानपिन, व्यायम, उपचार, जीवनशैली जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कास्कीका उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र ढकालले युगको आवश्यकता व्यहारिक शिक्षा भएकाले त्यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रका संस्थाले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गर्नु सराहनीय काम भएको भन्दै उनले यस्ता प्रयासबाट नागरिकका नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग मिल्ने बताए।
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले ल्याबले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै समाजका सबै वर्गको सहज र सुलभ पहुँचका लागि निःशुल्क शिविर आयोजना गर्दै आएको बताए।
माउन्ट अन्नपूर्ण उमाविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चिजकाजी गुरुङको अध्यक्षता, कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चालन र प्राचार्य सइन्द्र श्रेष्ठले स्वागत गरेको कार्यक्रममा एमाले पोखरा ३ का अध्यक्ष राजकुमारी भुजेल, टोल विकास संस्था समन्वय समिति पोखरा–३ का संयोजक विष्णुशंकर ख्वाउजू, सामाजिक परिचालक कमला पौडेलले पनि बोलेका थिए।
‘असल छिमेकीका लागि असल विद्यालय’ भन्ने उद्घोषका साथ छिमेकी मैत्री वर्ष २०७३ अन्तर्गत निःशुल्क शिविर आयोजना गरेको विद्यालयले वर्षभरि नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ।
Previous Article ‘अबको पाँच वर्षमा मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण नेपालमै’
Next Article सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा २ डाक्टर